XOG+DAAWO: DF Soomaaliya oo siyaasiinta mucaaradsan siyaasadeeda kala laabanaysa Baasaboorka Diblumaasig ah.
MUQDISHO(P-TIMES) – Ilo Wareedyo aad ugu dhaw Madaxtooyada Soomaaliya ayaa daaha ka rogaya in la amray in la xadido qaadashada ama bixinta Baasaboorka Diblumaasiga ah ee dalka, oo ay inta badan wataan madaxda dawladda, shaqsiyaadka dawlad gobaleedyada iyo cid kasta oo masuulka ah Soomaaliya.
Ilo wareedyadu waxay sheegayaan in sidaas oo kale la amray in dadka aan muhiimka aheyn oo dhan dib looga xareeyo ama looga celiyo Baasaboorkan, waxaana amarkan uu yahay mid ka yimi dhinaca dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha oo fulinaysa ayaa amartay in dib loo celiyo Baasabooradan ama ugu yaraan garoonka diyaaradaha lagu xanibo cid kasta oo lagu daray Liis rasmi ah oo ay waaxdan diyaarisay.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa kamid ah dadka adeegsada baasaboorka Diblumaasiga ah ee Soomaaliya, sidaas oo kale xubno katirsan maamulkiisa ayaa horey loogu qabsaday adeegsiga baasaboorkan oo ay ka dhasheen muran iyo is jiid-jiid kalifay in qaarkood mudo la xanibo.
Talaabada Xukuumadda ayaa loo arkaa mid la doonayo in lagu beegsado shaqsiyaad kasoo horjeeda aragtideeda, gaar ahaana kuwa dawlad gobaleedyada oo badankooda adeegsada baasaboorka Diblumaasiga ah ee Soomaaliya.
Somali pass port cidina gaar uma leh oo soomaali oo dhan buu ka dhaxeeyaa.Macquulnaa ma aha waxa illaa shalay la sheegayo oo ah dad soomaali ah baa laga qaadayaa baasa booradooda.Dadkaas oo lagu eedaynayo in aysan raacsanayn hindisaha Ina farmaajo iyo Xassan Cali Khayre.Oo qofkii yiraahda ma raacsani fakarka nimankaas ma waxaa laga saarayaa soomaalinimada?Kaasi waa fakar aad u liita.Waa qalad iyo rayi gaabni in ay labadaas nin ku fakaraan in ay ayagu dadka soomaaliyeed qofkay rabaan ka saari karaan soomaalinimada.War fakarkaaga kuguma raacsani iyo soomaalinimadaan kaaa saarayaa ma aha wax isu dhigma.